Home Wararka Guuldaradii xalay ee Xulka Soomaaliya oo lagu eedeeyay Xiriirka Kubadda Cagta
Xulalka Cumaan iyo Soomaaliya ayaa xalay isaga horyimid cayaar ka tirsan FIFA Arab Cup oo lagu marti geliyay dalka Qatar. Nasiib xumo cayaartaas ayaa ku dhamaatay mid Xulka Soomaaliya looga badidyay 2-1.
Cayaartaan oo ahayd mid shacabka Soomaaliyeed sugaayeen ayaa qeybtii hore cayaarta lagu kala nastay 2-0 oo Cumaan ku hogaamineysay, inkasta Xulka Qaranka Soomaaliya ay iska lumiyeen fursado muhiim ah.
Qeybta labaad ee cayaarta ayaa markii la isku soo laabtay cayaartooyda Xulka Qaranka Soomaaliya waxa ay la yimaadeen ciyaar wanaag ay aad ugu riyaaqeen taageerayaasha Soomaalida ee cayaarta u soo daawasho tegtay.
Inkastaa oo kooxda ay da’daashay hadana waxaa eeda guuldarada la saaray Gudoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubbada Cagta Cabdiqani Carab kaas oo cayaartooydii tababarka soo qaadatay ka saaray xulka kuna badalay koox qurbojoog ah oo ay isku reer ka soo jeedaan.